FILE - Supporters of the Zimbabwe African National Union's Patriotic Front (ZANU-PF) march in Harare, Feb. 24, 2010, to protest against a European Union decision to extend economic sanctions on Zimbabwe.
Vanhu vakawanda munyika vanoti vane maonero akasiyana siyana pazvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muZimbabwe nenyika dzekumavirira dzichiti vanhu ava vari kuita zvehuori pamwe nekutyora kodzero dzevanhu muZimbabwe.
Mumwe wevanoti zvirango zvehupfumi izvi ngazvibviswe zvachose, ndiVa Calvern Chitsunge, nhengo yeBroad Alliance Against Sanctions.
Nhengo dzeBroad Alliance Against Sanctions dzakatanga kuratidzira pamuzinda weAmerica muna Kurume 2019, uye dzinoti dzicharamba dziripo kusvika zvirango zvabviswa.
VaChitsunge vanoti zvirango izvi zviri kukanganisa hupenyu hwevana veZimbabwe.
VaChitsunge vanotiwo hurumende iri kuremekedza kodzero dzeveruzhinji pamwe kugadzirisa mitemo yaikanganisa kuzadzikiswa kwekodzero dzevanhu nekudaro hapana chikonzero chekuti zvirango izvi zvirambe zviripo.
Mutungamiri webato reLabour, Economists and African Democrats, Muzvare Linda Masarira, vanotiwo zvirango zvakaiswa izvi zviri kukuvadza hupfumi hwenyika nekudaro zvinofanirwa kubviswa.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muZanu PF, VaTafadzwa Mugwadi, vanotiwo zvirango zvehupfumi zvine chinangwa chekungobvisa hurumende yeZanuPF pachigaro. VaMugwadi vanoti hurumende yeZanuPF inoremekedza kodzero.
Asi munyori anoona nezvevanogara kunze kwenyika muMDC Alliance, VaClifford Hlatywayo , vanoti avo varipazvirango izvi vanofanirwa kutanga vazvichenesa kuti zvirango zvibviswe.
Mumwe murwiri wekodzero dzevanhu, VaPride Mkono,vanoti zvirango zvinofanirwa kuramba zviripo kudzamara vanhu vakatemerwa zvirango izvi vagadzirisa nyaya yekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe.
Izvi zvatsigirwawo nemurwiri wekodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, VaDewa Mavhinga, avo vanoti vari pazvirango vanoziva zvavanofanirwa kuita kuitira kuti zvirango izvi zvibviswe.
Nyaya yezvirango iri kusimudza musoro wayo panguva iyo nhumwa yeUnited Nations, Amai Alena Douhan, vari munyika vachinzwa pamusoro pekodzero dzevanhu pamwe nezvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende nemuZanu PF pamwe nemakambani avanodyidzana nawo.
Zvirango izvi zvakatanga muna 2002 apo nyika dzemuEuropean Union dzakabuda nezvisungo zvekusadyidzana munyaya dzehupfumi nevanhu nemakambani ari pazvirango.
Vaive mutungamiri weAmerica, VaGeorge W Bush, vakasaina mutemo we Executive Order muna Kurume 2003 waitemera zvirango zvehupfumi pamwe nekurambidzwa kushanyira America kwevanhu vari pazvirango izvi.
Nyika dzekuchamhembe kweAfrica kana kuti SADC dzine hurongwa hwekuratidzira musi wa 25 Gumiguru dzichikuridzira kuti zvirango izvi zvibviswe dzichiti zviri kuvhiringa hupfumi hweZimbabwe.
Asi America, iyo inoongorora zvirango izvi gore rega rega, inoti zvirango izvi zvicharamba zviripo pavanhu vanoita zvehuori pamwe nekutyora kodzero dzevanhu muZimbabwe.
Vari pazvirango zveAmerica vanhu vanodarika makumi masere, uye vanosanganisira mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, gurukota revasori, VaOwen Ncube, mukuru wemapurisa, VaGodwin Matanga nemamwe makurukota pamwe nevakuru vamwe vakuru muZanu PF.